Làlana ahitra ho an'ny dobo filomanosana. Fomba tonga lafatra handravahana. | Asa tanana
Jenny monge | 07/07/2021 23:21 | Decor, Asa tanana an-trano, fanodinana
Manao ahoana daholo! Amin'ny asa tanana ankehitriny dia ho hitantsika ny fomba ataovy ity lalana ahitra mahafinaritra ity hahazoana ny pisininay. Tena mety ny misoroka ny fanitsaka ny vato na ny tany ary manatratra ny lamba famaohana amin'ny fomba malefaka sy madio ary ny mifamadika amin'izany.
Te hahita ny fomba anaovantsika azy ve ianao?
1 Fitaovana ilaintsika hamboarina ny lalan'ny ahitra
Fitaovana ilaintsika hamboarina ny lalan'ny ahitra
Ahitra artifisialy. Ny hevitra hampiasa tapa-kazo dia asehoy azy ireo ... Nefa azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fividianana ahitra sy fanapahana azy.
Hazo na tohatra
Ny zavatra voalohany hataontsika dia manitatra ny clippings rehetra ananantsika ary mamolavola azy ireo amin'ny hety.
Hanomboka amin'ny tohatra isika izay no ezahantsika hatao lafatra kokoa. Raha ny momba anay dia nametraka hazo vitsivitsy ho tohatra isika, ka tsy maintsy boribory ilay sary nohetezana.
Raha vao manana ny tohatra isika dia hanomboka manapaka mahitsizoro manao ny ankamaroan'ny fanapahana ananantsika.
Avy eto no ivoahan'ny fahafinaretana. Handeha isika manapaka ny fanaovana endriny mifanentana mba hanovana fanovana taila fa miaraka amin'ny ahitra. Zava-dehibe ny tsy manipy ratra mandra-pahatapitry ny lalantsika satria afaka mameno ny banga rehetra izy ireo.
Vantany vao tapahina ny zava-drehetra handeha hametaka ny ahitra amin'ny faritry ny tohatra na izay terrazzo ny gorodona izahay. Ary homboantsika any amin'ireo faritra misy azy io. Tsy maintsy ataontsika lalina tokoa ny hoho mba hisorohana antsika tsy hanitsaka azy ireo ary handratra ny tenantsika. Safidy iray hafa raha tsy te hampiasa fantsika na lakaoly isika dia ny mitazona ireo tapa-ahitra amin'ny fametrahana vato amin'ny fomba stratejika.
Ary vonona! Raha manampy faritra lehibe amin'ny bozaka isika ary mamita ny haingon-trano amin'ny vato na hazo dia hanana gorodona tonga lafatra ho an'ny faritry ny pisininay izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » asa-tanana » Decor » Làlana ahitra ho an'ny dobo filomanosana
Asa tanana 5 hatao amin'ny fahavaratra